Super Soft dhogorta-super jilicsan dhogorta-Shaoxing Dareemo Irbadaha Dharka Co., Ltd.
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Product>Winter>dhogorta jilicsan ee super
Super jilicsan dhogorta
Taabasho jilicsan: fiilada kaliya ayaa leh ganaax iyo modulus foorara oo hooseeya, sidaas darteed dharkeedu wuxuu leeyahay jilicsanaan. Daboolid wanaagsan: maxaa yeelay cufnaanta u dhexeysa fiilooyinka ayaa ka sarreeya, aagga dusha gaarka ah waa weyn yahay, markaa daboolku wuu wanaagsan yahay.
Sababtoo ah faybarku wuxuu leeyahay aag gaar ah oo ballaaran oo gaar ah, sidaa darteed wuxuu leeyahay saameyn nuugid asaasi ah oo sarreysa iyo soo-kabasho, xidho sun-saarid raaxo leh ayaa wanaagsan. Villi-ku wuxuu si dhow ugu dhegsan yahay dharka inta la tirtirayo, sidaas darteed waxay leedahay saameyn nadiifin oo aad u wanaagsan.
Hantida indhaha: maxaa yeelay aagga dusha sare ee feybku wuu weyn yahay, milicsiga iftiinka ee dusha sare ee iskuxirka dunta ayaa liita, sidaa darteed, dharka ka sameysan duntaan, midabka iyo dhalaalka ayaa si deggan u qurux badan oo jilicsan.
Ma jiro wax la barbardhigi karo dhogorta jilicsan ee jilicsan inta laga hadlayo dareenka adag.
Dharka Lakabka / hawada Lakabka
Polyester Faransiis Terry spandex isku dhafan (felpa spun)